FIAKARAN’NY RANO : Tapaka vokatry ny rotsak’orana nentin’ny rivo-doza Ava ny lalana amin’ny Rn6-Rn 7
Tapaka ny lalam-pirenena faha-6 sy faha-7 iny. Noho ny fiakaran’ny rano vokatry ny rotsak’orana tamin’ny rivo-doza Ava. 8 janvier 2018
Nanomboka ny sabotsy maraina teo no voatery nijanona avokoa ny fiara fitaterana amin’ireo lalam-pirenena RN-6 sy RN-7.
Miandry ny rano ritra ny fiara vao afaka manohy ny diany. Ny sabotsy teo tamin’ny 10 ora sasany no tondraka ny rano teny amin’ny tetezana tao Ambalanomby fokontany Tsangambato. Tapaka tanteraka ihany koa ny tetezana Tanetilava ao amin’ny distrika Mampiokony. Ny zandary ao Mampikony no misahana ny filaminana any an-toerana. Nandray ny fepetra ihany koa ny tompon’andraiki-panjakana any Ambohimahasoa. Noho ny fiakaran’ny rano be sady mafy fikoriana dia hatahorana mafy hampidido-doza ny fampiasana ny tetezana ao Vohiposa. Nisy I hany ko any fihotsahan’ny tany eo anelanelan’i Camp Robin sy Ambatofitorohana. Voatery najanona avokoa ireo mpandeha fiara rehetra.
Nanomboka ny alakamisy teo dia efa nampiato ny zotra miatsinana ireo fiara fitateram-bahoaka miantsinana. Fiara iray isaky ny kaoperativa no nandeha ka ireo olona maika hamonjy asa ihany no nandeha tamin’izany. Ny kaoperativa tsirairay no nanapa-kevitra ny tsy hiasa noho ny tahotra vokatry ny faharatsian’ny toetr’andro.